Sasco expresses solidarity with students in Zimbabwe – LIVE news coverage from Pretoria, South Africa and Africa
JOHANNESBURG – The South African Students Congress (Sasco) has expressed solidarity with students in Zimbabwe and Zimbabweans in general.
Buthanani Thobela, Sasco secretary general said his organization condemns the recent arrest of Zimbabwe National Students Union (Zinasu) president Takudzwa Ngadziore, and the “state sanctioned suppression of freedoms meted out against activists in Zimbabwe”.
The Sasco remarks come weeks after the widely reported alleged abduction of another human rights activist Tawanda Muchehiwa a student in Zimbabwe’s second biggest city, Bulawayo.
“Sasco stands with Zinasu in seeking for justice, the release of Takudzwa Ngadziore and a return to constitutionalism in Zimbabwe,” said Thobela.
The students organization said companies based in South Africa, which are profiting from the “brutality meted against citizens and the suppression of freedoms in Zimbabwe” are complicit in the injustices carried out by the Harare government “and must be treated as such in South Africa”.
It is alleged Tawanda was abducted using a Impala Car Rental vehicle, but the company has been accused of refusing to disclose the person who rented out the vehicle.
“We demand that all Impala Car Rental sites in South Africa be closed down immediately,” said Thobela.
The student body said the South African government must take “practical steps” in lending a hand to the “oppressed people” of neighbouring Zimbabwe.
SASCO said its national executive committee will be meeting the leadership of the African National Congress on international relations to work on a pragmatic plan to act in solidarity with the people of Zimbabwe.
“An unstable Zimbabwe means an unstable South Africa and the SADC region,” said Thobela.